Louisiana ၏ 4200 Block ကို• DutchtownSTL • Dutchtown, St. Louis
Louisiana ၏ 4200 လုပ်ကွက်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
အပေါ် Posted ဇွန်လ 1st, 2020
Dutchtown ရှိ Louisiana ရိပ်သာလမ်း၏ ၄၂၀၀ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုကြိုဆိုပါသည်။
ကျွန်တော့်နာမည် Joel Silliman ပါ။ ကျွန်တော်က Louisiana ၄၂၀၀ အတွက်လက်ရှိဗိုလ်ကြီးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ကွက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်လက်ရှိဆက်ဆံရေးရှိခြင်းကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် National Night Out ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးလုပ်ကွက်ပါတီကိုဖွင့်သောအခါ၎င်းသည်တိုးတက်မှုတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းမှ ထွက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုပိုကောင်းသောဆက်သွယ်ရေးပုံစံကိုစတင်တီထွင်ခဲ့သည်။ ထိုမှတဆင့်ညှိနှိုင်းထားသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပါတီများ၊ ညှိနှိုင်းမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်အတူတကွစုစည်းနိုင်ခြင်းစွမ်းရည်တို့စတင်ခဲ့သည်။ လိုအပ်နေသူတွေကိုအိမ်နီးချင်းများကိုထောက်ပံ့ရန်။
ဤရူပါရုံတွင်လုံခြုံမှု၊ ဖြစ်ရပ်များနှင့်အဝေးရောက်လုပ်ငန်းများတွင် ဦး ဆောင်မှုဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံ၊ အီလက်ထရွန်နစ်နှင့်အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းရှိသူများနှင့်အားလုံးပါ ၀ င်နိုင်သည့်ဆက်သွယ်ရေးပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်နောင်လာမည့် ၅ နှစ်အတွက်မဟာဗျူဟာကြီးထွားမှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်များအပါအ ၀ င်လူထုအသိုင်းအဝိုင်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအသင်း ၀ င်များကိုပါ ၀ င်စေခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုချိန်ညှိနိုင်ရန်အခြားရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ နောင်လာမည့်နှစ်များတွင်အိမ်နီးချင်းလုပ်ကွက်များ၌ဤပုံစံကိုစတင်မည့်ခေါင်းဆောင်များအားလေ့ကျင့်ပေးရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အတွင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်စဉ်းစားနေပါကကျွန်ုပ်သို့မဟုတ်အခြားညှိနှိုင်းရေးမှူးများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်သင့်အားကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နေသည်၊ ရပ်ကွက်အတွင်းမည်သို့ကောင်းသောအရာနှင့်တိုးတက်နေသောအလုပ်အကိုင်အကြောင်းသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်လက်ရှိအိမ်နီးချင်းဖြစ်ပါကဤပုံစံတွင်သင်ဖြစ်လိုသည့်အတိုင်း ချိတ်ဆက်၍ ပါ ၀ င်ရန်အခွင့်အလမ်းများရှိသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းသင်နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်သင့်အားတက်လှမ်းရန်အားပေးပါသည်။
အောက်မှာ Filed သတင်းပိတ်ဆို့မှု. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. သတင်းပိတ်ဆို့မှု. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် စက်တင်ဘာလ 8th, 2020 .
Block Organizing - MizEducation Podcast မှ Tasha နှင့် Staci တို့နှင့်စကားစမြည်ပြောခြင်း
အပေါ် Posted ဖေဖေါ်ဝါရီလ 24th, 2021
ဒါကြောင့် MizEducation အမျိုးသမီးများနှင့်အတူပိတ်ပင်တားဆီးမှုစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီစကားဝိုင်းကဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောများ၊ အထွေထွေ ဦး တည်ချက်နှင့်အရင်းအမြစ်များတွေအများကြီးကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်ဤအရာကိုဖတ်နေသည်သို့မဟုတ်နားထောင်နေပြီးသင်၏ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုမည်သို့စုစည်းရမည်ကိုရှာဖွေလိုပါကဆက်သွယ်ရန်စာမျက်နှာကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ သင်၏လိုအပ်ချက်များ / စိန်ခေါ်မှုများကိုပိုမိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးရန်အချိန်သတ်မှတ်ပါလိမ့်မည်။ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတိုင်းတွင်၎င်းတွင်ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောလမ်းပိတ်ဆို့မှုများရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်ခန်းစာယူခြင်းသည်သင်၏လုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်အကျိုးရှိသည်။
ဒီမှာ Podcast တခုကိုထွက်စစ်ဆေးပါ။
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် မတ်လ 6th, 2021 .
ဗာဂျီးနီးယားမှအိမ်နီးချင်းအုပ်စုတစ်စုသည်သူတို့၏လုပ်ကွက်များဆိုင်ရာပြtheနာများအကြောင်းစပြောကြသည် - လမ်းပေါ်ရှိအမှိုက်များ၊ လမ်းကြားများ၊ ရာဇ ၀ တ်မှုများနှင့်အနီးအနားရှိအခြားအနှောင့်အယှက်ပေးမှုများ။ အိမ်နီးချင်းသန့်ရှင်းရေးအတွက်အလွတ်သဘောအစီအစဉ်ဖြင့်စတင်ခဲ့သည့်အိမ်နီးချင်းများအား Dutchtown ၏ထောင့်အားကောင်းလာစေရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်အိမ်နီးချင်းများအတွက်စနစ်တကျအမြဲတမ်းညွန့်ပေါင်းဖွဲ့လိုသောဆန္ဒပေါ်ပေါက်လာသည်။
သူတို့ဟာ Dutchtown မှာပထမဆုံးစီစဉ်ဖွဲ့စည်းတာမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အော်ဂဲနစ်စတင်သည်။ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အိမ်နီးချင်းများကအတွေ့အကြုံများကိုဆွေးနွေးခြင်းနှင့်အချည်းနှီးသောအတွေးအခေါ်များသည်လမ်းဆုံကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်သောအိမ်နီးချင်းများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့သည်လူတိုင်းကိုလမ်းပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားမည့်အစည်းအဝေးတစ်ခုနှင့်အစီအစဉ်များပြုလုပ်ရန်၊ မကြာခဏအိမ်နီးချင်းများအားပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်စီစဉ်ရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကဖုန်းနံပါတ်များနှင့်အီးမေးလ်များကိုဖလှယ်ကြသည်။ သူတို့ကပိုပြီးစကားပြောကြပြီးတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကြည့်ကြတယ်။ အရှိန်အဟုန်ကြီးထွားလာသည်။
ဘာဆက်ဖြစ် ဦး မည်နည်း
Greatlandtown တလျှောက်လုံးနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း Louisiana၊ Kingsland တရားရုံး၏ ၃၅၀၀ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့်အခြားသူများကို ၄၂၀၀ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွင်ဤအရာသည်စတင်ခဲ့သည်။ အိမ်နီးချင်းအနည်းငယ်အပြန်အလှန်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကစတင်ခဲ့သည့်အရာသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်သွယ်၍ စီစဉ်၊
DT2 • Downtown Dutchtown နှင့် ဒိန်းမတ် ဆက်သွယ်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်အခြားလုပ်ကွက်များအတွက်လိုက်နာရန်ပုံစံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏အတွေ့အကြုံများနှင့်ပါ ၀ င်ပြီးကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသောလုပ်ကွက်များကိုလျင်မြန်စွာစုစည်းနိုင်ရန်ကူညီသည့်ရိုးရှင်းသောပုံစံကိုဖန်တီးရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
သင်၏လုပ်ကွက်တွင်ငွေတောင်းခံလွှာနှင့်ကိုက်ညီသည့်အဖွဲ့အစည်းရှိပါသလား။ သင်ချင်ပါသလား ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူထိတွေ့ Get နှင့် Dutchtown တွင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစည်းရုံးရေး၏အနာဂတ်များအတွက်စီစဉ်ရန်ကူညီသည်။
လတ်ဆတ်မှုနှင့်သင်၏ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမည်သို့ပါ ၀ င်နိုင်သည်ကိုဆွေးနွေးခြင်းအတွက် Starz Salon တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ယနေ့ညလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံနိုင်ပါသည်။ သင်၏စိတ်ကူးများနှင့်မေးခွန်းများနှင့်အတူလုံခြုံရန်သေချာစေပါ။
အောက်မှာ Filed လုပ်ကွက်. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. လုပ်ကွက်, ရာဇဝတ်မှုနှင့်လုံခြုံမှု, DT2, ဒိန်းမတ်, Dutchtown CIDနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် သြဂုတ်လ 7th, 2020 .